दही सँग भुलेर पनि नखा`औँ यी ५ चिज !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lifestyle/ Health/दही सँग भुलेर पनि नखा`औँ यी ५ चिज !!
दही सँग भुलेर पनि नखा`औँ यी ५ चिज !!
गर्मीको प्रिय परिकार हो दही । दहीको ख`पत गर्मी मौसममा निकै बढ्छ । शीतल स्वभावको भएकाले दही तथा दही बाट बनाइने `मट्ठा, मोही आदि लाई गर्मी मौसममा निकै रुचाइन्छ । दही स्वास्थ्यका लागि निकै राम्रो मानिन्छ तर यसलाई केही चिजसँग मिसाउनु हुँदैन अन्यथा फाइदाको साटो नोक्सान हुनसक्छ ।
यस्ता चिजहरूका साथ दही खाँदा शरीरमा टक्सिन बन्न थाल्छ । फल स्वरूप वाकवाकी तथा उ`ल्टी हुने, पेटमा गड बड हुने जस्ता ल`क्षण देखा पर्छन् । दही स्वास्थ्यका लागि निकै राम्रो खाद्य पदार्थ हो, यसमा प्रशस्त मात्रामा क्याल्सि`यम तथा ल्या`टिक ए`सिड पाइन्छ ।
उचित ढंगले द`हीको सेवन गर्ने हो भने पाचन प्रणाली सुधा`र्नका लागि यसको अर्को विकल्प छैन भने पनि हुन्छ । तर दहीलाई निम्न लिखित चिजहरू सँग मिसाएर खाएमा भने स्वास्थ्यसमस्या उत्पन्न हुन स`किन्छः
आँप र दही : गर्मी फलको राजा मानिने आँपको पनि सिजन हो । भुलेर पनि आँप र दही एकसाथ खानु हुँदैन किनभने यी दुइटाको स्वभाव विपरीत हुन्छ । दही शीतकारक हुन्छ भने आँपले गर्मी गराउँछ तसर्थ एकसाथ सेवन गर्दा शरीरमा टक्सिन निर्माण हुनसक्छ ।
चीज र दही : आयुर्वेदले चीज र दहीलाई पनि एकैसाथ खान वर्जित गरेको छ । यिनलाई एकैपटक खाँदा शरीरमा नकारात्मक असर गर्छ।
इडली डोसासँग दही : यो परिकार नेपालको होइन तथापि कतिपय भारतीय तथा नेपाली रेष्टुराँहरूले यो परिकार सर्भ गर्छन् । इडली बनाउँदा दही मिसाइएको त हुन्छ तर पनि यसमा दही थपेर खाँदा स्वास्थ्यमा विगार गर्नसक्छ ।
केरा र दही : हामीकहाँ दहीको नाम लिनेबित्तिकै केराको नाम पनि आइहाल्छ । दही र केरा मिसाएर खुबै खाइन्छ पनि । यसपछि धेरैले पेट चस्किएको गुनासो पनि गर्छन् । तर दही र केरालाई एकसाथ सेवन गर्नु राम्रो मानिँदैन । खानै परे पनि २ घन्टाको फरक पारेर मात्र खानुपर्छ ।
मासको दालसँग दही : मासको दाल र दही एकसाथ खानु भनेको विष सेवन गरेसरह हो । भुलेर पनि यिनलाई एकसाथ खानुहुँदैन ।
उसिनेको आलुको प्रयोगले यसरि अनुहारलाई चम्काउन सकिन्छ ! पुरा पढ्नुहोस र शेयर गर्नुहोला!
कुर्कुच्चा फुटेर चिन्तामा हुनुहुन्छ ? त्यसोभए अपनाउनुस् यी ५ घरेलु उपाय
Vitamin C Benefits of Rich Practices